USB STORAGE DEVICE ခေါ် flash drive များကို ဘယ်လိုပိတ် ထားနိုင်မလဲ . - MYSTERY ZILLION
USB STORAGE DEVICE ခေါ် flash drive များကို ဘယ်လိုပိတ် ထားနိုင်မလဲ .
ကျွန်တော်တို့ ပိတ်မယ့် usb port မှာ နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း မှတ်ထားပေးပါ . usb port မှန်သမျှကို ပိတ်လို့ရတဲ့ နည်းလဲရှိပါတယ် . အခု ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ့နည်းကို မသုံးချင်ဘူး . virus ၀င်မှာစိုးလို့ flash drive တွေကိုပဲ ပိတ်ထားမယ် . Printer, Scanner, webcom, စတဲ့ port တွေကိုတော့ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားမယ် . ပိတ်မှာက storage device တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပိတ်မယ် . storage device မှာ flah drive တင်မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြား external storage device တွေဖြစ်တဲ့ MP3 (or) MP4 Player, ipot, iphone, external HDD , Digital Camera စတာတွေကိုလဲ ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . program မလိုဘဲ လတ်တလော menual နည်း နဲ့ လုပ်ကြည့်ကြရ အောင်ပါ .
Start >> Run ကို ခေါ်ပါ .
regedit ကိုရိုက်ထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ .
Registry Editor Box ပေါ်လာရင် အောက်က အတိုင်း သွားလိုက်ပါ . အောက်မှာ
HKEY LOCAL MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Services >> USBSTOR ကို သွားပြီး ပုံနှစ်ထဲကအတိုင်း2ချက်နှိပ်လိုက်ပါ . box တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
အဲ့ဒီ့ Box မှာ ပေါ်နေတဲ့ နံပါတ်ကို "3" ကနေ "4" ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ .
အဲ့ဒါဆိုရင် usb storage device များကို ပိတ်ထားပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ . သူ့ကို အသုံးပြုခွင့် ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် "4" ကနေ "3" ကို ပြန်ပြောင်း ပေးလိုက်ပါ . copy from www.likfehacker.com
လုပ်ထားလိုက်ပြီ ဆာဗာမှာ ဒါမှ ဗိုင်းရပ်စ်ထိတာ သက်သာမှာ
ကျွန်တော့ memory stick ကလုပ်လို့ မ၇ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နည်းရှိ၇င် ပြောပေးပါအုံး။
ဟုတ်ကဲ့။ registry ကနေ အဆင့်ဆင့် မှန်အောင်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး အကို memory stick က file system က FAT32 ဖြစ်၇ပါမယ်။
memory stick ထဲ့ လို့ မရဖြစ်နေလို့ပါ လုံဝလက် မခံဘူးဖစ်နေတယ်